Olee otú iji tọghata WebM ka DVD ngwa ngwa -
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata WebM ka DVD
WebM bụ onye na-emeghe audio-video format maka ojiji na HTML5 video. Ọ n'ọtụtụ ebe na site a ọtụtụ n'ime ama video nkekọrịta weebụsaịtị ka YouTube, Google, wdg Ọ bụrụ na ị ebudatara nza nke WebM videos si Internet, Ohere inweta bụ gị mkpa iji tọghata WebM ka DVD n'ihi na otu onye na-akpata ma ọ bụ ọzọ. Ka ihe atụ, na-egwu ha na ihe ọ bụla standalone DVD ọkpụkpọ, na-ọkacha mmasị gị WebM fim ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ịkọrọ ha ihe conveniently wdg
Isure WebM ka DVD, a DVD-ere ọkụ ngwá ọrụ dị oké mkpa. N'ihi nke a, Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac) na-ike na-atụ aro. Ọ na-enye unu na-a "dị nnọọ ole na ole clicks" ngwọta ka ị ngwa ngwa ọkụ a ọkachamara-na-achọ DVD diski gị WebM faịlụ. Nke a ndu n'okpuru ga-egosi gị zuru ezu nzọụkwụ.
1 mbubata gị WebM videos a oké WebM ka DVD Ntụgharị
Ị nwere ike iji onye ọ bụla n'ime ndị na-esonụ ụzọ atọ iji mara gị obodo WebM video faịlụ:
Na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window, ị pịa-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na họrọ "Tinye Files ..." na-agagharị na gị na kọmputa na mbubata WebM faịlụ na ị chọrọ ka ọkụ.
See "+ Import" button na a na ngwa ekpe ebi ndụ ka ị mbubata WebM faịlụ.
Chọpụta lekwasịrị WebM faịlụ na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ ha site na kọmputa gị ka a na ngwa ekpe ebi ndụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịhazie video usoro, ị dị nnọọ mata video ị chọrọ wee pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window. Ma mgbe ị pịa "Tinye aha" button, ị ' Eh tinye aha ọhụrụ n'ihi na gị DVD.
Atụmatụ: (Nhọrọ) Nke a na-eji ngwa nakwa awade ị a wuru na-video edezi ngwá ọrụ. Maka ndị chọrọ ka mma ha videos, na-asị, ewepụtụ, akuku, bugharia, tinye dị iche iche ma ọ bụ mmetụta backgroud music wdg, a video nchịkọta akụkọ ga-afọ ju gị.
2 hazie a DVD menu
Ị nwere ike ịmepụta persionalized DVD menu site na-ahọpụta a jụụ DVD menu template na-agbakwunye ụfọdụ ọcha dị ka thumbnail, n'okirikiri, ederede, picture na ndị ọzọ. Iji nweta ya DVD menu template Ọbá akwụkwọ, ị dị nnọọ mkpa pịa NchNhr taabụ n'elu nke a window. Ọ bụrụ na ị wanna ọzọ DVD menu ndebiri, dị nnọọ see green ala akụ bọtịnụ na a window ileta anyị online akụ n'ọbá akwụkwọ.
3 tọghata WebM ka DVD
Mgbe ị ịhụchalụ dum oru ngo iji hụ ikpeazụ mmetụta, ị dị nnọọ see "Ọkụ" taabụ na n'elu nke a window na-amalite DVD na-enwu. Ugbu a, i kwesịrị itinye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski. Mgbe ahụ, tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ na nke ugbu a window, ọzọ, see "Ọkụ" button. Ozugbo, a ngwa ga-eme ọrụ a n'ihi na ị. Ị ga-enweta a writen DVD diski a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị.
Cheta na: Nke a WebM ka DVD Ntụgharị ga mpikota onu gị faịlụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na size dum DVD ngo bụ karịrị gị DVD nchekwa ikike.
Olee otú iji tọghata MPEG2 ka DVD